ဝါးခယ်မ : I am Longing - Hlaing Teik Khaung Tin
I am Longing - Hlaing Teik Khaung Tin
Gilt glass filtered moon rays
Light my stately diamond – studded couch
Where alone I hear the drum’s sweet sound
Announce the third watch of the night .
Dawn is no longer far – off .
On my thazin scented couch
Alone I await your coming .
Hands to my forehead
I cannot but muse
Over all that has passed
And I am filled with pensive sadness .
On oath you promised never to shun me
Always to be loyal to me
Solemnly you swore , “ If I become King
I shall make you my Queen .
Even ifaGoddness tried to seduce me ,
Never would I surrender to her .”
“ In coronation’s splendid display
I shall give to you the place of chief Queen
With eight Brahmins and many pages attending you
And at the time of Libation’s ceremonial
I shall cause all men to worship you ”
I believed you and gave you my love .
Now .. how different is your manner .
Oh , Prince of Kanaung how stern is your face .
Where is the former brightness of your face ?
Where are the loving caresses
You so fondly showered on me ?
Oh , Prince of Kanaung .
Princess Hlaing – Teik – Khaung – Tin
( 1833 – 1857 CE )
This is only part ofavery long song sung originally by Princess Hlaing – Teik – Khaung – Tin supposedly while waiting for her husband Crown Prince Kanaung to return to her chamber .The sequel is that he finally hears her sweet voice , remembers her and comes back again to her from an adjoining chamber .
( From The Burmese Classical Poems Book – Selected and Translated by The Most Rev . Friedrich V.Lustig – Buddhist Archbishop of Latvia )
စိန်ခြူးကြာညောင် ၊ လရောင်လင်းပါလို.
မှန်ရွှေပြူ ပြတင်းရယ်က ၊ မယ် ခုမျှော်
သုံးချက်စည်တော် ရိုက်ဆော် ညင်းတယ်လေး
လင်း ပြန်လု နော် …..
လာနိုးငယ် မယ်မျှော်လို. တကိုယ်တော်ထူး
ထွေရာ စိတ်ကူးပါလို. ဖူးရွှေလက်တင်
သစ္စာတော် စူးပါပေ. ဆိုဦးကပင်
ခင်လေးကို မောင်ကြင်ငဲ့ သည်သက်တွင်ပဲ
နောင်သွေမလွဲပါဘု ယုံတော.မေ… ပြဒုမဗွေ
မတ်ခြွေရွေ ၀န်းငယ် နှင်. ရေသွန်းတော် ခံ
မဟေသီမှန် ဒေ၀ီတပ်တယ်လေး ဦးဆယ်ထပ် ရံ …..
ခုများမှာ သူတဥာဏ် နဲ. မူတစ်ဟန်ခြား
ပြုအားတော်ရန်ကော. မျက်ထားတော် သုန်
မချစ်ပြင်ပြင် မကြင်ကိုယ်တော် စိမ်းတယ်လေ.
လတ်ဗီးယား ဗုဒသာသနာပိုင် အရှင်အာနန္ဒာ ဘာသာပြန်ဆိုတော်မူသည်. Burmese Classical Poem စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
Posted by အဇ္ဇုန at 6:35 PM
Labels: Cocktail of Wakema and Myanmar, ကဗျာ..စာနု...အက်ဆေး
မအူပင်နည်းပညာကျောင်း ဆဋ္ဌမအကြိမ် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲဆို...
၂၀၁၃ အကယ်ဒမီ ( ၃ ) - တရားခံရှာမရ ဖြစ်ကြလေပြီ
၂၀၁၃ အကယ်ဒမီ ( ၂ ) - ပြီးရင်ဝေဖန်ပါ ဆိုလို...
၂၀၁၃ အကယ်ဒမီ - မစခင်က ရှင်းကြ /လင်းကြ အချို.ကျ ရှင...
မြန်မာပြည် မှာ Facebook သုံးသူ ဘယ်လောက်ရှိလဲ
မြို.လေးဆီ က ဗိုလ်ချုပ် ရာပြည်.ပွဲ အကြို
ဦးလှဆွေ ( သို. ) ဘူးလက်လှဆွေ ၏ အတွေး ၊ အမြင် ၊ အေ...
Buddha Bar - စော်ကားလို. ရလို. စော်ကားကြသူများ
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ. - အမေ.လျော.ခံ သူရဲကောင်းတို.အတွက်...
AK-47 Company က Design သစ် မိတ်ဆက်
Association of MAUBIN GTI , GTC , TU Alumni 's Fir...